Ganacsiga wuxuu ku dhawaaqay koox shaqo oo ka socota gobolka oo dhan oo ku saabsan shaqaalaha soogalootiga ah iyo loo shaqeeyayaasha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga wuxuu ku dhawaaqay koox shaqo oo ka socota gobolka oo dhan oo ku saabsan shaqaalaha soogalootiga ah iyo loo shaqeeyayaasha
Ganacsiga wuxuu ku dhawaaqay koox shaqo oo ka socota gobolka oo dhan oo ku saabsan shaqaalaha soogalootiga ah iyo loo shaqeeyayaasha
Keep Washington Kooxda ka shaqeysa baaritaanka, horumarinta xeeladaha iyo habab lagu taliyay si loo hubiyo in dhaqaalaha gobolka uu sii wado ka faa'iideysiga shaqaalaha kala duwan iyo ganacsiyada ay leeyihiin soo galootiga
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday koox shaqaale ah oo ka kooban 17 xubnood oo gobolka oo dhan ah oo loo sameeyay ka jawaab celinta Sharciga Shaqada ee Washington ee 2019 oo kahadleysa siyaasada gobolka oo dhan ee lagu taageerayo dhaqaalaha Washington iyo doorka muhaajiriinta ee goobta shaqada.
Xubnaha waxaa ka mid ah wakiilo ka kala socda kooxaha u ololeeya soogalootiga kala juqraafi ahaan kala duwan, ururada xirfadleyda ah ee matalaya ganacsiga, ururada shaqaalaha ee leh joogitaanka gobolka oo dhan, beeraha iyo danaha sharci ee soo galootiga, ururada aan macaash doonka aheyn ee diinta ku saleysan, kooxaha u doodaha sharciga ee diirada saaraya socdaalka iyo cadaalada danbiyada, hay'adaha tacliinta iyo sharci fulinta. . Xubnihii ugu horreeyay ee ka shaqeeya Kooxda Washington ee loo xilsaaray saddex sano waa:
Paula Arno Martinez, Komishanka Gobolka Washington ee Arimaha Isbaanishka
Paul Benz, Shabakada Waxqabadka Caqiidada
Carino Barragan, United Cuntada iyo Shaqaalaha Ganacsiga Caalamiga ah
Malou Chavez, Mashruuca Xuquuqda Muhaajiriinta Waqooyi Galbeed
Sam Cho, Komishanka Gobolka Washington ee Arimaha Aasiyada Baasifiga Ameerika
Bre Elsey, Xafiiska Beeraha Gobolka Washington
Alex Galarza, Mashruuca Cadaalada Waqooyi Galbeed
Antonio Ginatta, Adeegyada Sharciga ee Columbia
Julia Gorton, Ururka Isbitaalada Washington
Karen Lewis, Jaamacadda Gobolka Washington
Monserrat Padilla, Shabakad Midnimo Midnimada Soogalootiga Washington
Sandra Rodarte, Isbahaysiga Bulshada Latino
Kristin Kershaw Snapp, Ururka Midhaha Geedka Gobolka Washington
Keelcy Perez Woolley, Tableau
“Washington waxay ku barakeysan tahay inay halkan joogaan fiisooyin ay dad badan oo tayo sare leh ku leeyihiin halkan. Nasiib darrose, xaasaskooda, oo waliba leh xirfado looga baahan yahay xirfado badan iyo warshado muhiim ah, inta badan ma heli karaan ruqsad shaqo inkasta oo loo-shaqeeyayaashu ay leeyihiin shaqo furitaan, Sen. Lisa Wellman. "Kooxda shaqadu waxay baari doontaa arrimaha sidan oo kale ah waxayna eegi doonaan sida aan u hubin karno in gobolkeennu uu si buuxda u qabsado awoodda shaqaalaha oo dhan."
"Markay in ka badan 16% shaqaalaha gobol ka kooban yihiin soo galooti, ​​ma dafiri karo inaan u baahanahay raggan iyo haweenka dadaalka badan," ayay tiri. Rep. Lillian Ortiz-Iskeed, D-Mukilteo, oo kafaala qaaday biilka wehelka ee guriga. "The Keep Washington Work Act waxay xaqiijineysaa inaan ilaalino qiyamkeena kala duwanaanta, cadaalada, sinaanta iyo fursada anagoo ka ilaalinayno shaqaalaheena dhibaateynta iyo xadgudubka, si ay usii wataan wax ku biirinta kobaca dhaqaalaheena iyo kobcinta dhaqankeena."
"Ganacsatada Washington waxay ku tiirsan yihiin shaqaale kala duwan oo ay ku jiraan ku dhowaad hal milyan oo soogalooti ah," ayuu yiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. "Shaqaalahan, iyo sidoo kale ku dhowaad 15% milkiileyaasha ganacsiyada gobolka oo ku dhashay meel ka baxsan dalkan, waxay qayb ka yihiin fiilada xoojisa bulshada bariga ilaa galbeed, magaalooyinka iyo miyiga."
Kooxda shaqadu waxay dib ugu soo sheegi doonaan sharci dejinta sanad walba shaqadooda, kuwaas oo diiradda saari doona:
Sameynta istiraatiijiyad lala yeesho ganacsiyada ganacsiga gaarka loo leeyahay, shaqaalaha, iyo ururada u dooda dadka soogalootiga ah si ay u taageeraan warshadaha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka ee gobolka oo dhan;
Samaynta cilmi baaris ku saabsan qaababka lagu xoojinayo waddooyinka xirfadaha ee soogalootiga iyo abuurista iyo xoojinta iskaashiga lala yeelanayo warshadaha kobaca la saadaalinayo;
Taageerida ganacsiga iyo hogaaminta beeraha, kooxaha madaniga ah, dowlada, iyo ururada u dooda dadka soogalootiga ah dadaal guud ahaan gobolka si loo siiyo saadaalin iyo xasiloonida shaqaalaha ee warshadaha beeraha; iyo
Ku talinta dariiqooyinka lagu hagaajinayo awooda Washington ee soo jiidashada iyo haysashada milkiilayaasha ganacsiga soo galootiga ee bixiya fursado ganacsi iyo ganacsi oo cusub.
Kooxda waxaa la filayaa inay ku kulmaan ugu yaraan afar jeer sanadkii meelo ka mid ah gobolka oo ay ku soo wargeliyaan xaaladda iyo daqiiqadaha kulanka Ganacsatada iyo dadweynaha. Kursi waxaa dooran doona xubnaha kooxda shaqada warbixin sanadle ahna waxaa loo gudbin doonaa sharci dajinta sanadwalba waaxda ganacsiga.
Contact: Penny Thomas, Isgaarsiinta Ganacsiga, (206) 256-6106
horumarinta dhaqaalahaWar-saxaafadeedXoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Ku saabsan wpengine
Kani waa isticmaale maamulaha "wpengine" ee ay shaqaalaheena u adeegsadaan helitaanka goobta maamulkaaga si ay u bixiyaan taageero iyo dhibaato-xallin. Kaliya waxaa lagu gali karaa barta ku jirta galkayaga aaminka ah ee otomaatiga soo saaraya furaha sirta ah oo duminaya erayga sirta ah ka dib markii xubin ka tirsan shaqaalaha uu soo galay. Waxaan qaadnay talaabooyin aad u adag si aan u hubinno in isticmaaleheena aan loo adeegsan doonin in si khaldan loo waxyeeleeyo goobaha macaamiishayada.
Ku arag dhammaan qoraalada wpengine →
← Warbixinta guddi-howleedka gobolka ayaa ku talinaysa xulashooyinka wax looga qabanayo la'aanta helitaanka daryeelka carruurta ee la awoodi karo Dib-u-eegista Bishii Wacyigelinta Rabshadaha Qoyska iyo Ka-hortagga →